Vietnam dia mandefa ny zotra Hong Kong-Phu Quoc
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Vietnam dia mandefa ny zotra Hong Kong-Phu Quoc
Nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny zotra Hong Kong - zotra Phu Quoc, ny zotram-pitaterana vaovao, Vietjet, izay nahatonga azy io ho kaompaniam-piaramanidina voalohany miasa ny serivisy mivantana eo anelanelan'ny toerana roa, nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny dia an-habakabaka sy ny varotra eo amin'i Vietnam sy Hong Kong ary koa manerana faritra. Ity koa no làlana faharoa an'ny Vietnam mankany Hong Kong avy any Vietnam manaraka ny lalàny Ho Chi Minh City - Hong Kong. Ireo mpandeha tamin'ny sidina fanokanana manokana dia nahagaga fa nahazo fahatsiarovana mahafinaritra avy any Vietnam.
Ny zotra Hong Kong - Phu Quoc dia hampandeha sidina miverina miaraka amina sidina efatra isan-kerinandro manomboka amin'ny 19 aprily 2019. Miaraka amin'ny ora 2 na 45 minitra isaky ny tongotra ny sidina dia miala ao Phu Quoc amin'ny 10:50 ny sidina. ny maraina ary midina ao Hong Kong amin'ny 14:35. Ny sidina miverina dia miainga avy any Hong Kong amin'ny 15:40 ary tonga any Phu Quoc amin'ny 17:25 (ora rehetra any an-toerana).
Fantatra amin'ny anarana hoe "Nosy Voahangy", i Phu Quoc no nosy lehibe indrindra any Vietnam. Amin'ny maha iray amin'ireo toerana fizahan-tany be mpiresaka indrindra any Azia miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra sy olona sariaka ao an-toerana, Phu Quoc dia nahasarika fampidiram-bola marobe tao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny tato ho ato ary lasa iray amin'ireo toerana fialantsasatra malaza indrindra any Vietnam. Manampy ny antso amin'ny nosy ny mpitsangatsangana iraisampirenena dia tsy afa-mivoaka amin'ny visa mandritra ny 30 andro na latsaka. Afaka mankafy ny fialantsasatra amoron-dranomasina amin'ity paradisa fialantsasatra ity ny olona ao Hong Kong.
Miaraka amin'ny tamba-jotra misy zotra 113 dia miasa fiaramanidina azo antoka i Vietjet miaraka amin'ny tahan'ny fahatokisana ara-teknika 99.64% - ny taha ambony indrindra amin'ny faritra Azia Pasifika.